Fashion - Famolavolana
Ny Fanangonana Ny Vehivavy Ao amin'ity famoriam-bola ity, Yina Hwang dia aingam-panahy ny aingam-panahy izay endrika simetrika sy asymmetric miaraka amin'ny fihetsik'ireo kolontsaina mozika ambanin'ny tany. Nofeheziny tamin'ny fotoan-dehibe niforonan'ny tenany ny famoriam-bola izany mba hamoronana famoriam-bola sy fitafiana ary haingo azo tanterahina mba hananganana ny tantarany. Ny pirinty sy ny lamba rehetra ao amin'ilay tetikasa dia tany am-boalohany ary nampiasa hoditra hoditra PU, Satin, Power Mash ary Spandex ho an'ny fototry ny lamba izy.
Ny Lamba Soratra Vita Pirinty
Ny Lamba Soratra Vita Pirinty Ny Voankazo Miara-mankalaza dia fankalazana ny herin'ny sarin'ny voninkazo. Ny voninkazo dia lohahevitra malaza nosoratana ho personification amin'ny literatiora sinoa. Mifanohitra amin'ny lazan'ny voninkazo mamony, ny sarin'ny voninkazo mihintsana dia matetika mifandray amin'ny jinx sy ny fady. Ny fanangonam-bokatra dia mijery hoe inona no manatsara ny fomba fijerin'ny vondron'olona iray momba ny tsy fahalalana sy ny fanalan-jaza. Namboarina tamin'ny 100cm ka hatramin'ny 200cm ny halavan'ny akanjo vita amin'ny tulle, fanaovana pirinty vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny translucent, ny teknika fanaovana lamba dia mamela ny fanaovana pirinty hijanona ho saribakoly sy ho matevina amin'ny bolongam-bolo, mamorona endrika endrika pirinty any anaty habakabaka.
Peratra Miatrika fihetseham-po tsotra ny fihetsika mampihetsi-po. Amin'ny alàlan'peratra Touch, ny mpanaingo dia mikendry ny hampita izany fahatsapana hafanana sy tsy misy endrika izany amin'ny metaly mangatsiaka sy matevina. Vavahana 2 dia mifamatotra mba hamolavola peratra izay manolotra olona 2 mitazona tanana. Manova ny lafiny manodidina azy peratra rehefa mihodina amin'ny rantsantanana ny toerany ary jerena avy amin'ny zoro samihafa. Rehefa apetraka eo anelanelan'ny rantsan-tànanao ny ampifandraisana ireo dia mipoitra na mavo na fotsy peratra. Rehefa apetraka amin'ny rantsantanana ireo singa mifampitohy dia afaka mahazo tsara ny loko mavo sy fotsy miaraka.
Ny Peratra Ara-Drafitra
Ny Peratra Ara-Drafitra Ny famolavolana dia mampiditra ny firafitra vita amin'ny metaly izay misy ny druzy amin'ny fomba izay misy ny fanamafisana ny vato sy ny firafitra vita amin'ny metaly. Misokatra be ny firafitra ary azo antoka fa ny vato no kintana ny volavola. Ny endrika tsy miangatra amin'ny baolina maloto sy metaly mihazona ny firafitra dia mitondra fahatsapana kely ho an'ny famolavolana. Izy io dia sahy, marefo ary mora ampiasaina.
Ny Fanangonana Ny Vehivavy Rojo Vy Sy Kavina Ny Lamba Soratra Vita Pirinty Peratra Peratra Ny Peratra Ara-Drafitra